Xukuumadda oo guddi u saartay xallinta colaadda Gaalkacyo. - Wargeyska Faafiye
Home 2015 November 29 .Warka Xukuumadda oo guddi u saartay xallinta colaadda Gaalkacyo.
Xukuumadda oo guddi u saartay xallinta colaadda Gaalkacyo.
Xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa guddi heer qaran ah u xilsaartay xallinta colaadda ka taagan magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug.
Ra’iisal wasaaraha Soomaaliya, Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake oo warbaahinta kula hadlay Muqdisho, kaddib socdaal uu ku tagay magaalooyinka Cadaado iyo Garoowe ee xarumaha maamullada Galmudug iyo Puntland ayaaa warbaahinta u xaqiijiyay magacaabista guddiga .
Wuxuu sheegay in guddiga oo ay xubno ka yihiin wasiirro, xildhibaanno iyo saraakiil sare oo ciidan uu labada maamul iyo qaybaha bulshada kala xaajoon doono sidii xal waara loogu heli lahaa colaadda Gaalkacyo.
Magaalada Gaalkacyo ayaa maalmahanba waxaa ka taagnaa xiisad colaadeed oo u dhexaysa maamullada Puntland iyo Galmudug, taas oo sababtay isku dhacyo uu ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho, dhaawac iyo barakac.
Somalia gets military police force.
C/Qeybdiid oo weerar qaaday
Ciidanka Kenya Iyo Kuwa somaliya Maxey ugali la yihiin Kismaayo ?
Garoonka Aadan Cabdulle oo dib u howlgalay.
Qarax ka dhacay Magaalada Garissa.